Tag: kuraira kwekushanda | Martech Zone
Tag: kurongeka kwekushanda
Maitiro eOrder of Operations akandigadzirira ini kuChirongwa
Muvhuro, October 22, 2007 Mugovera, October 17, 2015 Douglas Karr
Algebra yagara iri nyaya yandinodisisa. Iko hakuna kwakawanda dzidziso inosanganisirwa, ingori bhokisi rezvishandiso nemaitiro uye marongero emabasa ekugadzirisa mukati. Kana iwe ukadzokera kumashure kuchikoro chesekondari, iwe uchayeuka (wakatorwa kubva kuMath.com): Chekutanga ita mashandiro ese akarara mukati mevabereki. Tevere, ita chero basa neanotsanangudza kana radicals. Kushanda kubva kuruboshwe kurudyi, ita zvese kuwanda uye kupatsanura. Chekupedzisira, kushanda kubva kuruboshwe kurudyi, ita zvese zvekuwedzera uye